Vaovao - Fanampiana lamaody - ny fironana amin'ny antsipirian'ny pataloha yoga
Amin'ny maha-zavatra tena ilaina amin'ny yoga sy ny fitaizam-batana, ny pataloha mamorona vatana dia lasa manandanja kokoa. Ny famolavolana ampahany dia zava-dehibe kokoa. Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny asan'ny fanatanjahantena, ny saina bebe kokoa dia omena amin'ny fahamendrehana sy ny fahatsapana lamaody. Ny famolavolana antsipirihany feno fahaiza-manao dia afaka mamelombelona ny fomba fanatanjahan-tena mahazatra. . Ity tatitra ity dia hampiasa haingon-tongotra amin'ny valahana, famolavolana splicing mitambatra, pitsopitsony amin'ny tongotra, fiovan'ny vava amin'ny tongotra, famolavolana haingon-trano fanampiny, ary fanodikodinam-pananahana ho toy ny tena axis hanadio ny asa-tanana sy ny endrika famolavolana ampiasaina ao, ary hitondra aingam-panahy ho an'ny mpamorona hamorona vokatra vaovao.
Ny famolavolana antsipirian'ny andilany miendrika lakroa dia afaka manova tsara kokoa ny fiolahana valahana ary mampiseho ny andilana vehivavy; ny famolavolana ny andilan'ny pataloha yoga amin'ny lohataona sy fahavaratra tamin'ny 2022 dia misy fiovana bebe kokoa, ary ny volon-doko misy ny lokon'ny onja sy ny loko mifanohitra amin'ny endriny dia tafiditra ao anaty anatiny, lamaody kokoa ny yoga raha manampy ny fihetsiky ny hetsika; faharoa, ny valahana hazo fijaliana dia azo avahana, mampiseho ny fikasihan'ny andilan-jazavavy amina andilany, mahaliana sy lamaody.
Ny famolavolana antsipiriany ny pataloha yoga an-dàlam-pandrosoana dia manome ny fiasan'ny fanohanana ny tongotra rehefa mihinjitra be, manakana ny tongotra tsy hirongatra ary hisorohana ny henatra; ny antsipirian'ny dian-tongotra amin'ny vanim-potoana vaovao dia lamaody sy maro karazana kokoa, ary ny tranonkala web stitching sy ny endriny mifanohitra dia ampidirina Mba hanasongadinana ny ambany rehetra, asaina ny lohataona sy ny fahavaratra amin'ny 2022 dia afaka mametaka pataloha tongotra sy malefaka. miaraka amin'ny bokotra haingon-trano eo am-baravaran'ny tongotra hanamboarana, ary ny mpanjifa dia afaka manamboatra ny antsipiriany amin'ny dingana-tongony irery. Mandritra izany fotoana izany dia azo ampifandraisina amin'ny boaty fanomezana isan-karazany ny tadin'ny kofehy. Afaka misafidy araka izay tiany ny mpanjifa, izay manatsara ny fahafinaretan'ireo mpanjifa ary afaka mamaly tsara izay ilain'izy ireo. Ho fanampin'ny dian-tongotra miendrika webbing, ny famolavolana kofehin-kibo namboarina tany am-boalohany dia afaka mampiseho tsara kokoa ny kitrokelin'ny vehivavy;
Ny famolavolana ny fanokafana ny tongotra dia teknika famolavolana mahazatra ampiasain'ny mpamorona. Ny fomba hahatratrarana ny zava-baovao sy ny lamaody no tokony hodinihintsika; ho an'ny famolavolana ny fanokafana ny tongotra amin'ny vanim-potoana vaovao, azonao atao ny manandrana fitsaboana maro tsy misy lavaka, ary manisy fehiloha mangatsiaka mangatsiaka amin'ny sisin'ny lavaka. Faharoa Ny fanjairana ny tarika multi-base tany am-boalohany dia manatsara ny fahatsapan'ny lamaody ny pataloha ankapobeny. Ny fanjairana ny lamba landy mangarahara miaraka amina lohataona asymmetrika dia mendrika ny hojerena amin'ny lohataona sy fahavaratra 2022.
Ny valahana amin'ny lafiny dia vita amin'ny kitapo kely malefaka sy azo esorina. Ny haingo dia entanin'ny akanjo ivelany, izay mety amin'ny famoahana entana. Izy io koa dia azo ampiasaina ho haingon-trano amin'ny pataloha yoga. Izy io koa dia afaka manamora ny mpanao fampihetseham-batana hivoaka hividy fanatanjahan-tena ary hampidina entana madinidinika toy ny karatra fidirana sy lakile, izay manatsara ny fahafaha-manao; Ny fehikibo azo ovaina dia azo zahana amin'ny valahana amin'ny sisiny, mba hahafahan'ny mpanjifa manamboatra ny elastika amin'ny valahan'izy ireo irery, ary hitombo avo roa heny ny fahatsaran'ny lamaody.
Ny teknikan'ny lavaka dia hitohy ampiasaina amin'ny lohataona sy fahavaratra taona 2022. Hitombo ny faritra misy lavaka amin'ny vanim-potoana vaovao. Mandritra izany fotoana izany, ny haben'ny hollowing dia manana fironana lehibe kokoa noho ny teo aloha, ary mampiseho ny asan-tanana manjaitra tany am-boalohany, mampiseho ny hakantony. Ary mahatsikaiky.